KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Sheekada Hooyo Raxmo “Wiilkaygii Nolol iyo Geeri Midna kuma Haayo” / Warbixin + Sawiro
Saturday 23 February 2013 06:05
Sheekada Hooyo Raxmo “Wiilkaygii Nolol iyo Geeri Midna kuma Haayo” / Warbixin + Sawiro
Baladweyne (KON) Hooyo Raxmo waa Hooyo da’ah way ilimaynaysaa waxaan kula kulmay saldhiga Magaalada Baladweyne waxaana dhexmartay sheeko kooban, Anigoo wax ka waydiiyay dhibaatada heesata.
Hooyadaan ayaa waxay Keydmedia Online u sheegtay in Wiil ay dhashay mudo ka hor loo gacan galiyay ciidamada Itoobiya isla markaana aysan meel ku ogayn wiilkeedii dhimasho iyo nolol midna.
Hooyo Raxmo ayaa sheegtay in Ciidamada itoobiya wiilkeeda uu gacanta u galiyay nin laga yaqaano magaalada Baladweyne isla markaana ninkaasi oo mudo ka macnaa magaalada uu dib ugu soo laabtay Baladweyne.
Waxay sheegtay in ninkaasi ay ka dacwaysay Maxkamada magaalada Baladweyne, labo bilood uu xirnaay ka dibna la siidaayay iyadoo maxkamadu aysan siin wax war ah.
Taliyaha Saldhiga magaalada Baladweyne Cali Nuux Mahadala oo Keydmedia Online ay Arintaan kala hadashay ayaa wuxuu sheegay in haweenaydaan ay dacwad keentay saldhiga, isla markaana ciidamada saldhiga ay soo qabteen ninkaan ayna ku wareejiyeen maxkamada.
Gudoomiyaha Maxakmada magaalada Baladweyne Sheekh C/rixmaan oo asna aan xafiiskiisa ugu tagnay ayaan wax ka waydiinay arintaan iyo waliba waxa ka jira, iyo maxkamadu sida ay ka yeeshay arintaan.
Sheekh C/rixmaan ayaa sheegay baaritaan ay samaysay maxkamada magaalada Baladweyne in ugu danbayntii ay ku ogaatay in wiilka loo gacan galiyay ciidamada Itoobiya uu ka tirsanaan kooxda Al-Shabaab.
Gudoomiyaha maxkamada ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in gabi ahaanba ay maxkamadu sii daysay ninkii loo heestay in wiilkaasi uu gacan galiyay ciidamada Itoobiya maadaama ay cadaatay inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab.
Keydmedia Online ayaa Sawir ka qaaday ninkaan ciidamada Itoobiya u gacan galiyay wiilka ay dhashay hooyo raxmo xili uu marayay magaalada Baladweyne.